Kedu ihe ị na-agụ na ụmụ nwanyị?
Ọ bụghị nne na-eto eto ọ bụla, na-anụ site na nwatakịrị nwanyị, okwu ahụ bụ "lactation" maara ihe ọ bụ na mgbe ọ malitere n'ime ụmụ nwanyị. Site na okwu a, anyị na-ekwu usoro mmepụta nke mmiri ara ara nke mmiri ara ara.
Kedu ihe bụ lactation?
Usoro nke lactation na ụmụ nwanyị na-agụnye atọ nkebi:
Na nke mbụ, enwere ọganihu kpọmkwem na mmepe nke gland. N'oge lactogenesis , mmiri ara ehi na-apụta, nke a na-ahụ ozugbo ọ mụsịrị nwa.
Lactopoiesis bụ usoro mmepe na mmezi nke ọgwụ ara ehi ara. Ihe omuma ato ndia nile di n'otu echiche - lactation. Otú ọ dị, na omume, a na-aghọta lactation dị ka ịmepụta mmiri ara nke mmiri ara ara.
Kedu mgbe a na-azụlite lactation?
Ọtụtụ ụmụ nwanyị, ndị nwere afọ ime ugbu a, amaghị ihe bụ lactation na mgbe oge a malitere n'ime ụmụ nwanyị.
Ngalaba mmiri ara ehi amalite na ọkara 2-3 ụbọchị mgbe nnyefe. Otú ọ dị, ogologo oge tupu ha, ọtụtụ ndị inyom na-edeba nzuzo nke nzuzo. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha enweghị agba chaa chaa, mgbe ụfọdụ, na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha odo odo. Nke a colostrum, i.e. Mmiri nke mbụ nke glands na-ezo. Uzo ya di iche bu eziokwu na o nwere nnukwu abuba abuba, mana o nweghi ihe ndi bara uru.
Kedu ihe m ga - eme ka m nwee ike ịnọgide na - agụ akwụkwọ?
Nkà mmụta nke lactation na ụmụ nwanyị bụ na iji nọgide na-enwe ya, mkpali nke nụ nke mammary glands dị mkpa. Ọ bụ ebe a na hypothalamus na a na-emepụta ihe na-emepụta ihe nke na-akpali mkpesa nke prolactin, kpọmkwem maka mmepụta mmiri ara site na ahụ.
Ọ bụ ya mere, nke mbụ, ịmalite ma nọgide na-arụ ọrụ, nwanyị kwesịrị itinye nwa ahụ n'obi n'obi mgbe ọ bụla o kwere omume. Taa, maka oge mbụ a na-etinye nwatakịrị ahụ na mkpara, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo a mụsịrị ya.
Ogologo oge ole ka lactation ga-adịru?
Ná nkezi, usoro mmepụta mmiri ara ehi dị ihe dịka ọnwa 12. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ihe nwere mmetụta dị na ya. N'ihi ya, mmiri ara ehi na-apụ n'anya na mberede, mgbe nsogbu na-akpata nsogbu, ọrịa.
Ọtụtụ mgbe, ndị nne, mgbe ha nụsịrị okwu ahụ bụ "ntozu okè," aghọtaghị ihe ọ bụ. A na-akọwa ọnọdụ a na-ahụ maka ọdịdị nke mmiri ara ara, nke a pụtara. ọ na-abịa n'oge ị na-aṅụ ara nwa. Ịmepụta akwụkwọ ndị tozuru okè na-ewe ọnwa atọ.
Mgbe ụmụaka toro, ndị nne na-anụ mgbe ụfọdụ banyere pediatrician okwu ahụ bụ "mkpali nke lactation", ma amaghị ihe ọ bụ. Okwu a na-ezo aka n'ịmechaa oge ị na-enye nwa ara, nke a na-ejikọta ya na ụba nke anụ ahụ dị n'ime obi, ịkwụsị mmiri ara ehi. A na-ahụ ya ruo afọ 3-4 nke ndụ nwa ahụ.
Ọka maka inye nwa
Enwere ike maka carrots nne na-elekọta nwa?
Karịa ịgwọ akpịrị ịzụ nne?
Mkpụrụ obi ara - uru na ọghọm
Enwere ike iji walnuts na-enye nwa ara?
Umu ara maka nri
Cabbage akwukwo na lactostasis
Ntughari umu nwanyi - nke ọnwa nke abuo
Enwere ike inye nne na-enye nwa ara?
Nne m nwere ike na-enye nwa ara?
Akara maka inye nwa
Ntughari umu nri nke umu afo nke ndu
Mmiri mmiri maka nne nọọsụ
Inhalation na ụkwara ụkwara nebulizer
Cubes nke mmiri na-agba
Kedu otu esi eri ginger?
Nri na ude mmiri
Mmiri akpụkpọ ụkwụ - ejiji ụdị na ihe na-eyi ha a mmiri?
Nri ofe egicha na ndi mara mma
Strawberry n'oge ime - 3 trimester
Mpempe akwụkwọ maka igodo
Kedu ka esi egbochi ọbara si imi?
Nkume akpụkpọ ụkwụ
Uro caviar na tomato maka oyi - uzommeputa
Tubootitis na ụmụaka
Ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ
Olee otú Ani Lorak furu efu mgbe ọ mụsịrị nwa - menu
Karọt "Queen nke ụbịa"
Nchikota akwụkwọ ngebichi n'ime ime ụlọ ahụ
Udara jam na gelatin maka oyi